DIGNIIN CULUS: Wakiilka Anthony Martial Oo Eedayn Culus U Soo Jeediyay Maamulka Man United Isaga Oo Ku Dhawaaqay In Martial Uu Go’aan Ku Gaadhay In Uu Ka Baxo Old Trafford. – GOOL24.NET
DIGNIIN CULUS: Wakiilka Anthony Martial Oo Eedayn Culus U Soo Jeediyay Maamulka Man United Isaga Oo Ku Dhawaaqay In Martial Uu Go’aan Ku Gaadhay In Uu Ka Baxo Old Trafford.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ee Anthony Martial ayaa si wayn uga niyadjabsan kooxdiisa wuxuuna go’aan ku gaadhay in uu gabi ahaanba iskaga dhaqaaqo Old Trafford waxaana faah faahin buuxda xaalada mustaqbal ee Martial ka bixiyay wakiilkiisa oo waliba si adag ugu digay maamulka Old Trafford.
Sida uu wakiilkiisu xaqiijiyay Anthony Martial waxa uu go’aan ku gaadhay in uu iskaga baxay Manchester United kadib markii ay maamulka United ku fashilmeen in muddo 8 bilood ah ay xidiga ree France la gaadhaan heshiis cusub oo qandaraaskiisa lagu cusboonaysiinayay.
Agaasimaha shirkada USFA ee Philippe Lamboley oo wakiil ka ah Martial ayaa si aan gabasho lahayn uga hadlay xaalada xidiga ree France wuxuuna Man United ku eedeeyay in iyaga oo ah kooxda aduunka ugu wayn ay ku fashilmeen in siddeed bilood ah heshiis la gaadhaan Martial taas oo uu ku sifeeyay in ayna si dhab ah u doonayn in uu kooxda xubin muhiim ah ka noqdo.
Philippe Lamboley oo si faah faahsan uga hadlay mustaqbalka xidiga ay wakiilka ka yihiin ee Anthony Martial ayaa yidhi: ” Kadib markii suurtogalnimo kasta laga fikiray, Anthony waxa uu doonayaa in uu ka baxayo Manchester United. Waxaa jira doorashooyin badan, hadda may qaan gaadhin in laga hadlo, kadib Martital ayaa ka hadli doona si uu tan u faah faahiyo”.
Wakiilka Martial ee Philippe Lamboley ayaa waraysigan siiyay warbaahinta dalka France ee RMC Sport wuxuuna isaga oo hadalkiisa sii wata yidhi: “Manchester United waxay doonaysaa in ay heshiiska Anthonay kordhiso isla markaana ma doonayso in ay isaga lumiso, laakiin waxaanu dhawr bilood awoodi waynay in aanu heshiis gaadhno”.
Philippe Lamboley oo weerar ku qaadaya Man United sida ay ugu fashilantay in heshiiska Martial ayaa yidhi: ” Waxaan filayaa in Manchester United oo ah kooxda aduunka ugu awooda badan markaa lagu xusuusan doono in ayna wada xaajood siddeed bilood ah heshiis ku helin, sababtu waa in ayna xaqiiqdii doonayn in isaga ay ka dhigto xubin muhiim ka ah kooxda. Taas ayaa ah xiddidka go’aankan, waa go’aan si fiican loo tixgaliyay.
Philippe Lamboley ayaa dhinaca kale sheegay in ilaa hadda Martial uu wali heshiis kula jiro Manchester United isla markaana uu ixtiraami doono wuxuuna xusay in kalmada ugu danbaysa ee arinta Martial ay Man United iska leedahay isaguna uu ixtiraami doono go’aanka kooxda.
Laakiin Philippe Lamboley ayaa si cad u sheegay in maanta Martial uu nijadjabsan yahay wuxuuna isaga oo arintan ka hadlaya yidhi: “Maanta Anthony wuu niyadjabsan yahay sababtoo ah waxa uu saddex xili ciyaareed muujiyay jacaylka uu kooxda u hayo iyo jamaahiirta”.
Hadalka aan gabashada lahayn ee Philippe Lamboley ayaa muujinaya sida ay u xumaatay xaalada Man United iyo Martial iyo waliba niyadjabka xidiga ree France ka soo gaadhay in koobka aduunka uu ku seegay sababta Jose Mourinho iyo in aanu xubin muhiim ah ka ahayn Man United.
Waxaa hadda la sugi doonaa in Martail uu faah faahin ka bixiyo go’aankiisa sida uu Philippe Lamboley xaqiijiyay laakiin waxay arintani digniin culus u tahay maamulka Man United oo hadda lagu hor fashiliyay jamaahiirta kooxdooda sida wayn u jecel in Martital uu kooxda sii joogo.